Ngeshwa, inkinga ka ikhule ezimbotsheni lakhulisiwe ebusweni - isitswebhu amantombazane abakhuluphele abanikazi isikhumba oily.
Kufanele kuqondwe ukuthi ububanzi pores ebusweni - uhlobo emcimbini wokuvulwa follicle izinwele, okuyinto ngaleyo ndlela evula okukhipha we ndlala sebaceous. Naphezu kweqiniso lokuthi okwamanje azikwazi ukukhula izinwele, lena "umgodi" nokunye izobizwa kuvulwa follicle izinwele.
Ngokuhamba kwesikhathi, kungase futhi uyogcwala sebum, okuyinto umane wenza ucingo Pore futhi ngaleyo ndlela iphenduke comedo yangempela.
Indawo eyinhloko "kwendawo yemvelo" enkingeni nje enjalo kungenziwa kubhekwe njengento esiphongweni sakhe, imphumulo kanye kwesilevu, kule ndawo oqoqele nezindlala sebaceous kakhulu, okuyinto isebenza. Lokhu kuyiqiniso ikakhulukazi ngokuphathelene kuthomba phakathi nenkathi yokuthomba, lapho kukhona ukuthuthukiswa esebenzayo hormone kanye pores ebusweni abangavikelekile kakhulu futhi athambekele kumiswa induna.
Active nezindlala sebaceous kuholela ikhule ezimbotsheni avimbekile, futhi igcwele kumiswa tubercles, futhi iningi le induna. Kuyinto ukuze ikhule ezimbotsheni ebusweni zihlale ehlanzekile akazange yakha "ingozi" ubuhle, kudingeka anakekele ikhava kanye nokusetshenziswa kwamathuluzi ezikhethekile, okuyinto ukulawula ukukhiqizwa sebum.
Okokuqala kungase kube ukuhlakanipha ukufuna usizo uchwepheshe, futhi njalo ngenyanga ukuvakashela beautician. Nokho, awusebenzi ngaso sonke isikhathi nethuba ukusebenzisa Ochwepheshe, ngoba lezo zinqubo akuzona ezishibhile ngakho, futhi kuthatha isikhathi esingakanani ukwaba njalo. Kulokhu, kukhona amathuluzi amaningi ezingasiza unciphise ikhule ezimbotsheni ngobuso bakho ekhaya. Ngaphezu kwalokho, ukunakekelwa efanele nsuku zonke kuzosiza ukwenza isikhumba ngcono kakhulu, wasinikeza a ukubukeka enempilo futhi ukuqeda ukuqubuka ezingadingekile namaqhubu.
Ungenza at buso ikhaya elula eyokusiza alwa obabayo ezimbotsheni enwetshiwe avimbekile ngobuso bakho.
Indlela ephumelela kakhulu zalezi kwenziwa ngokusebenzisa Iqanda elula mhlophe futhi 1 isipuni kalamula. Kuyadingeka ukuxuba izithako ezimbili futhi sisebenzise ebusweni izingqimba eziningana. Kubalulekile ukusebenzisa ungqimba ngayinye elandelayo emva ezomile odlule ngokuphelele. Ekupheleni inqubo udinga ukugeza ubuso bokuqala ngamanzi afudumele bese abandayo, futhi uyakwesula eyomile ithawula. Lokhu imaski ahlanze hhayi kuphela ikhule ezimbotsheni, kodwa futhi Kuyanda ubuso, futhi usiza ukuqeda imibimbi.
Ukuze yesikrini esilandelayo, uzodinga usawoti ezivamile, amazambane isitashi, shisisa ubisi noju. Zonke izithako ezidingayo e inani 1 isipuni (ngaphandle kobisi, kufanele wanezela, uma kunesidingo, kuze kube ukuvumelana ukhilimu omuncu). Ingxube kwaphumela kumele basakaza ngokulinganayo phezu kobuso futhi ushiye imizuzu 20. Zonke wageza off ngamanzi afudumele.
A imaski elula, esiza ukunciphisa pores ezinkulu ebusweni, esenziwe decoction yamakhambi. Kuyadingeka ukuthatha chamomile, elder flower nomcako, zonke kuxutshwe isilinganiso 1: 1: 1, uthele 250 ml amanzi, wembatha ipuleti. Ingxube umphumela amakhambi kufanele alethwe abilayo futhi ubilise imizuzu engaba ngu-10. Esikhathini mass chilled engeza oatmeal nepepper lube impuphu kanye isipuni uju. Kufanele uthole mass viscous, okungase ukusakaza ebusweni. Bamba imizuzu 15-20 futhi hashaza ngamanzi afudumele.
Zonke lezi buso izikhathi 1-2 ngesonto kungaba kwenziwe. Ukuze umphumela esiphezulu, udinga i-nokulungisa isikhumba by ukuhlanza ikhule ezimbotsheni ebusweni usebenzisa khuhla mnene noma uyaxebuka. Into esemqoka - Ungeqisi it, ngoba izindlela ezinjalo elakhiwa izinhlayiya olwalwenza, okuyinto kungalimaza imiphetho ikhule ezimbotsheni, okwenza inqubo ephulukisa eside. Le nqubo kuzosusa izinhlayiya isikhumba esifile, okusho ukuthi izakhi umsoco imaskhi ngeke zingene ezijulile futhi kangcono, ukuhlinzeka nomphumela omuhle.
Khumbula ukuthi isikhumba ezithandwa ayebuthaka okunamafutha, ludinga ukunakwa obuphelele. Qinisekisa ukuthi usebenzisa lotion ukuthi asule ubuso bakho kabili ngosuku.
Njengoba for makeup, kungcono ukusebenzisa ubhuqu okhilimu kanye Matting nomphumela eheha ingqondo. Gwema ukhilimu iso shadow makeup yakho bheka fresh futhi yemvelo njalo.
Khumbula, ikhule ezimbotsheni lakhulisiwe ebusweni - akuyona umusho, kungenzeka futhi kubalulekile ukubhekana nalokhu yokusilela, futhi isikhumba sakho ziyojabula nge ukubukeka kwayo.
Nappa Isikhumba - impahla evundile ukukhiqizwa izinto ezifanele futhi ukhululekile
Ithempeli umhlengikazi ophethe Taganka ikheli, umsebenzi schedule. Likuphi ethempelini Matrona eMoscow Taganka?